Chọtara 101 ~ MATIU, MAK, Luukkaan, Johanneksen, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
“Unu echekwala na m bịara iweta udo nꞌụwa. Abịaghị m iweta udo, kama ọ bụ iwebata mma agha.
Jisọs zara sị, “Ada m, okwukwe gị emeela ka ahụ dị gị mma. Laa nꞌudo. Bụrụkwa onye nweere onwe ya site na nrịrịa!”
“Nnu bụ ihe dị mma. Ma ọ bụrụ na nnụ etufuo ụtọ ya, gịnị ka a ga-eji mee ka ọ dị ụtọ ọzọ? Ya mere, unu etufula ụtọ unu. Unu na ibe unu biri nꞌudo.”
Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden sydämestä Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi.
Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat.
Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa.
"Voi teitä! Te rakennatte muistomerkkejä profeettojen haudoille, mutta ketkä heidät tappoivat? Teidän isänne.
Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä.
He nousevat haudoistaan -- hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.
Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta,
ỌLU OZI 2:47
Ha nọgidere ito Chineke. Chineke mekwara ka udo dị nꞌetiti ha na ndị bị na Jerusalem. Chineke mekwara ka ọtụtụ mmadụ bụrụ ndị a na-azọpụta. Ndị a a zọpụtara na-ejikọ onwe ha nꞌọgbakọ ndị nile kwere ekwe.
ỌLU OZI 7:26
“Nꞌụbọchị nke abụọ ya, Mosisi hụrụ ụmụnna ya abụọ ka ha na-alụ ọgụ. Ọ gbalịrị ime ka udo dịrị nꞌetiti ha. Ọ gwara ha sị, ‘Unu bụ ụmụnna, gịnị mere unu ji emegburita onwe unu?’
Nꞌihi na Sọl ghọrọ onye kwere ekwe mere ka a kwụsị ịkpagbu ndị kwere ekwe. Nzukọ Kraịst nile, ndị dị na Judia, Galili na Sameria, nọọrọ nꞌudo, guzosiekwa ike nꞌokwukwe ha. Ndị kwere ekwe biri ndụ ịsọpụrụ Chineke site nꞌinyeaka nke Mmụọ Nsọ. Ha gakwara nꞌihu na-amụba.
ỌLU OZI 10:36
Ana m eche na unu anụla ihe banyere ozi ọma ahụ Chineke zigaara ndị Juu. Ozi ọma nke na-asị na udo dị ugbu a nꞌetiti Chineke na mmadụ site nanị na Jisọs, Onye nzọpụta na Onyenwe ihe nile.
ỌLU OZI 12:20
Mgbe Herọd nọ na Sizaria, ndị obodo Taịa na Saidọn zipụrụ ndị ozi ha izute ya nꞌihi na Herọd na-eweso ha iwe. Ma ndị ozi a buru ụzọ mee ka ha na Blastọs ode akwụkwọ eze bụrụ enyi. Ha rịọrọ ya ka o mee ka udo dịrị. Nꞌihi na ndị obodo ahụ na-esite nꞌobodo nke Herọd na-achị na-enweta ihe oriri ha.
ỌLU OZI 23:24
“Gaanụ jikere narị ndị agha abụọ. Ndị a ga-aga Sizaria nꞌelekere toolu nke abalị a. Họpụtakwa narị ndị na-ama ube abụọ na iri ndị na-agba inyinya asaa. Nyekwa Pọl inyinya nke ọ ga-agba, ma mee ka o rute nꞌebe Feliks onye na-achị akụkụ a nọ nꞌudo.”
ỌLU OZI 24:2
Mgbe a kpọbatara Pọl, Tatulọs pụtara guzo kwuo sị, “Onye a na-asọpụrụ ka gị Feliks bụ. I nyela anyị ndị Juu ahụ udo. I meela ka anyị hapụ ịbụkwa ndị a na-eleda anya.
ỌLU OZI 27:7
Anyị nwere ọtụtụ ụbọchị nke na-enyeghị anyị ahụ udo. Nꞌoge anyị na-erute nso Snidus, oke ifufe bidoro ifesi ike. Anyị enwekwaghị ike ịga nꞌihu nꞌụzọ ahụ. Nꞌihi ya anyị chigharịrị ihu site ụzọ ọnụ mmiri Salmone.
ỌLU OZI 27:44
Ma ọ sịrị ndị na-enweghị ike igwu mmiri gbalịa ịchọ ụzọ ọzọ, site nꞌịghọnye aka na mkpirikpi osisi na nꞌihe ndị ọzọ si nꞌahụ ụgbọ ahụ. Ya mere mmadụ nile rutere elu ala nꞌudo.
Nꞌihi ya, ana m edere unu nile bi na Rom akwụkwọ a, unu ndị Chineke hụrụ nꞌanya, ndị a kpọkwara ka ha dị nsọ. Ekpere m bụ ka Chineke nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, nye unu amara ya na udo ya.
Ma otuto na nsọpụrụ na udo nke si nꞌebe Chineke nọ, ga-abụ nke onye ọ bụla na-eme ihe Chineke na-achọ, ee, onye Juu ọ bụla na ndị mba ọzọ.
Ugbu a ebe e sitere nꞌokwukwe anyị mee ka anyị na Chineke dịrị na mma, udo dị ugbu a nꞌetiti anyị na Chineke nꞌihi ihe Onyenwe anyị Jisọs Kraịst meere anyị.
Nꞌihi na ọ bụrụ na mgbe anyị bụ ndị iro ya, Chineke mere ka anyị na ya dịrị nꞌudo, site nꞌọbara ahụ Kraịst kwafuru, ọ̀ bụkwaghị eziokwu na Chineke ga-azọpụta anyị ugbu a o bi nꞌime anyị, nꞌihi na e meela ka anyị na ya dịrị nꞌudo?
Ọ bụkwaghị nanị nke a, ma anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ nꞌọnọdụ ọhụrụ a, nke anyị na Chineke ịnọ nꞌudo, nke e mere ka ọ dịrị site nꞌihe Onyenwe anyị Jisọs Kraịst meere anyị mgbe ọ nwụrụ, ka e site nꞌaka ya mee ka mgbaghara Chineke rute anyị aka.
Nꞌezie, mmehie nke Adam mehiere, bụ ihe wetara ikpe ọmụma nye mmadụ nile, ma ezi omume nke Kraịst, bụ ihe na-eme ka mmadụ na Chineke dịrị nꞌudo.
ma ndị Juu nọ kemgbe na-agbalisi ike ime ka ha na Chineke dịrị nꞌudo site nꞌidebe iwu, enwebeghị ike ime onwe ha ndị Chineke ga-anabata?
Oleekwanụ otu mmadụ ga-esi pụọ gaa kwusaa, ma ọ bụrụ na o nweghị ndị zipụrụ ya? Nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu mgbe ọ sịrị, “Lee ka ọbịbịa ndị na-ekwusa ozi ọma udo nke dị nꞌetiti Chineke na mmadụ si maa mma.”
Soronụ ndị ọzọ biri nꞌudo. Anyala isi, kama wedata onwe gị ala. Jirikwa ọṅụ mee ka gị na ndị ọnọdụ ha dị ala na-enwe mmekọrịta, echekwala na ị maara ihe nile.
Nꞌihi na ihe dị mkpa na ndụ onye Kraịst abụghị ihe anyị riri, ma ọ bụ ihe anyị ṅụrụ. Kama ọ bụ ime ka ezi omume, na udo, na ọnụ na-esi nꞌaka Mmụọ Nsọ abịa dịrị na-aga nꞌihu.
Ka ihe naagụsị gị agụụ ike bụrụ ime ihe gaeweta udo na ime ihe nꞌụzọ a ga-esi mee ka e wulie ndị ọzọ elu.
Ugbu a ka Chineke anyị onye na-enye udo, nọnyere unu nile. Amin.
Ka Chineke nna na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nye unu amara na udo nke na-esi nꞌaka ya na-abịa.
Ma ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwụnye nke na-ekweghị ekwe achọọ ikewapụ onwe ya, ka di ma ọ bụ nwụnye nke kwere ekwe ghara ịkwụsị ha. Ha kewapụ onwe ha. Nke a bụ nꞌihi na Chineke chọrọ ka ụmụ ya bie ndụ udo nꞌezinụlọ ha.
1 KỌRINT 9:16
Ọ bụghị na ọ dị ihe ọzọ pụrụ iche ikwusa ozi ọma na-ewetara m. Enweghị m ike ịkwụsị ikwusa ozi ọma. Nꞌihi na ọ bụrụ na m akwụsị ikwusa ozi ọma, agaghị enwe udo na ọṅụ ọ bụla. Onye a bụrụ ọnụ ka m ga-abụ ma ọ bụrụ na m akwụsị ikwusa ozi ọma Onyenwe anyị.
Ka amara na udo na-esite nꞌebe Chineke Nna anyị, na nꞌebe Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nọ, dịrị unu.
2 KỌRINT 3:9
Ọ bụrụ na ụzọ ahụ na-eweta ọnwụ ji ebube bịa, ebube nke ụzọ ọhụrụ ahụ na-eweta udo nꞌetiti Chineke na mmadụ ga-adịkwa ukwuu.
Ma mgbe onye ọ bụla si na mmehie ya chegharịa, lọghachikwute Onyenwe anyị, mgbe ahụ a na-eme ka ihe mkpudo ahụ gharakwa ịdị.
Ma anyị nile ndị bụ ụmụ Chineke enweghị ihe mkpudo ọ bụla nꞌihu anyị. Anyị dị ka enyo na-egosi ndị mmadụ ebube Chineke. Mgbe Mmụọ Onyenwe anyị na-arụ ọrụ ya nꞌime anyị, ọ na-agbanwe anyị, ime ka anyị dịrị ka ya.
2 KỌRINT 5:18
Ma ọ bụ Chineke bụ onye na-eme ihe ndị a. Ọ bụ ya onwe ya sitere nꞌaka Kraịst mee ka anyị na ya dịrị nꞌudo. Ma ugbu a o nyela anyị ọrụ ije ozi, ịkpọ ndị ọzọ ka ha bịa ka ya na ha dịrịkwa nꞌudo.
2 KỌRINT 5:19
Ozi ọma Chineke ziri anyị ikwusa bụ na ọ chọrọ ka ya na mmadụ nile dị nꞌudo site na Kraịst. Chineke agụkwaghị mmehie nile mmadụ mere megide ya, kama o jirila ọbara Kraịst sachapụ ha.
Ka amara na udo nke na-esite nꞌaka Chineke bụ Nna anyị na nꞌaka Onyenwe anyị Jisọs Kraịst apụta dịnyere unu nile.
ma anyị bụ ndị Juu maara na mmadụ ọ bụla na Chineke enweghị ike ịdị nꞌudo, site nꞌidebe iwu ndị Juu, kama, na udo na-adị nꞌetiti Chineke na mmadụ nanị site nꞌokwukwe anyị nwere na Jisọs ịsachapụ mmehie anyị. Ọ bụ nke a mere anyị ji kwere na Jisọs Kraịst, ka e mee ka Chineke nabata anyị, site nꞌokwukwe anyị, ọ bụghị nꞌihi na anyị debere iwu ndị Juu. Nꞌihi na o nweghị onye ọ bụla a ga-azọpụta nꞌihi na o debere iwu ndị Juu.
Ka udo na ebere dinyere ndị nile na-ebi ndụ ha dị ka ụkpụrụ ndị a nile si dị. Ka udo na ebere dịkwara ndị nile nọ ebe nile, bụ ndị nke Chineke nꞌezie.
Ka amara na udo nke na-esite nꞌebe Chineke Nna anyị na nꞌebe Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nọ dịrị unu.
Na-emenụ ihe ọ bụla unu si nꞌaka m mụta, ma ọ bụ ihe unu hụrụ m ka m na-eme. Chineke onye na-enye udo ga-anọnyekwara unu.
na-edegara ndị Kraịst nọ na Kọlọsị akwụkwọ a. Ndị ahụ bụ ụmụnna anyị nꞌime Kraịst site nꞌokwukwe ha. Ka Chineke Nna anyị nye unu amara ya na udo ya.
Ọ bụ site nꞌihe Ọkpara ya mere ka Chineke ji kpebie ka ụwa nile bịaghachikwute ya. Nꞌihi na site nꞌọnwụ nke Kraịst nwụrụ nꞌelu obe, na ọbara ọ wụsịrị, e meela ka udo dịrị nꞌetiti Chineke na mmadụ nile. Ihe nile dị nꞌụwa na nꞌeluigwe nwekwara ike ịbịakwute Chineke ugbu a.
Akwụkwọ ozi a si nꞌaka anyị, Pọl na Saịlas na Timoti, na-abịara nzukọ Kraịst dị na Tesalonaịka, ndị e jikọtara ha na Chineke Nna, na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst. Ka Chineke gọzie unu, ma nyekwa unu udo.
Ka Chineke bụ Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst gọzie unu, ma tụkwasịkwara unu udo nke ya.
Ugbu a, ka Onyenwe anyị, onye udo na-esi nꞌaka ya abịa tụkwasịrị unu udo ya mgbe nile, nꞌime ọnọdụ ọ bụla unu nọ nꞌime ya. Ka ọ nọnyekwara unu.
Kpeekwara ndị eze ekpere, ha na ndị nile nọ nꞌọnọdụ dị elu, ma ọ bụ ndị na-achị anyị. Ka anyị nwee ike ibi ndụ udo na nke ịdị nwanyọọ, jiri oge anyị nile na-ebi ndụ ịsọpụrụ Chineke, na nke ime ezi omume.
1 TIMỌTI 2:5
Ka ha ghọta na ọ bụ nanị otu Chineke dị, na e nwekara nanị otu onye na-ekpe udo nꞌetiti Chineke na mmadụ, onye ahụ bụ Kraịst Jisọs, onye weere ndụ ya nye nꞌihi ịgbapụta mmadụ nile.
Ọ bụ gị Taitọs, ezi nwa m nwoke nꞌime okwukwe nke anyị nwekọrọ, ka m naedetara akwụkwọ ozi a. Ka Chineke onye bụ Nna, na Kraịst Jisọs Onye nzọpụta anyị, nye gị amara ya na udo ya.
Eberaham kewapụtara otu ụzọ nꞌụzọ iri nke ihe nile ọ dọtara nꞌagha nye ya. Otu ụzọ nꞌụzọ iri a bụ onyinye ọchụchụ aja nꞌomume ndị na-efe Chineke. Ugbu a ihe aha a bụ Melikizedeki pụtara bụ Eze ezi omume. Aha obodo ya bụ Salem pụtara Udo. Nꞌihi nke a, a kpọkwara Melikizedeki Eze Udo.
ma ị sị enyi gị ahụ, “Laa nꞌudo nwanna m, Chineke gọzie gị. Ya nyekwa gị uwe ị ga-eji chụọ oyi, na nri ị ga-eji zụọ afọ gị,” ma ọ dịghị ihe ọ bụla i mere iji nyere ya aka igbo mkpa agụụ na-agụ ya na oyi na-atụ ya, ọ̀ dị ụzọ okwu ọma nile i kwuru siri nyere ya aka?
Ma ndị ahụ bụ ndị na-eme udo bụ ndị na-agha mkpụrụ udo. Ha ga-aghọta mkpụrụ nke ezi omume.
Ya sitekwa nꞌajọ omume ya tụgharịa bido ime ezi ihe. Ya gbalịakwa ibi ndụ udo, ma na-agbasokwa ndụ udo.
Ka mara na udo Chineke dịnyere unu na mmaji na mmaji, ụdị udo na amara ya na-esite na mmazu unu maara ya na-abịa.
Bikonụ ndị m hụrụ nꞌanya, mgbe unu nọ na-eche ọbịbịa nke ụbọchị ahụ jisienụ ike hụ na aka unu dị ọcha, kwerekwanụ ka unu na ndị ọzọ biri nꞌudo, ka a hapụ ịchọta ntụpọ ọ bụla nꞌime unu mgbe unu ga-eguzo nꞌihu Chineke.
Nꞌoge a, inyinya ahụ na-acha ọbara ọbara gbapụtara. E nyere onye ahụ na-anọkwasị nꞌelu ya mma agha dị ogologo nyekwa ya ike ime ka udo hapụ ịdịkwa nꞌụwa. E nyekwara ya ike iwebata ọchịchị nke ndị na-emegide emegie nꞌime ụwa. Mgbe ahụ ibu agha dị iche iche na igbu mmadụ jupụtara nꞌebe nile.